Amandla okuthula: ukuthula kufana nenyoni, uma uvumela indiza, uzobe unenkinga yokuyibamba "I-Serenity ilahlekelwa yiziningi, ivumela ukucasula kancane futhi ilahle kuze kube uziqede ngoba ususebenzise amandla amakhulu ngokungadingekile "
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 4, 2019 00: 40 Awekho amazwana
Uma wazi ukuthi ungazibamba kanjani, uzozinakekela, "Thula, wehlise umoya, uzithibe, uzithibe, futhi uzobe ukhululekile." » Asisho ukuthi: Amagama ayisiliva, ukuthula kuyigolide!
Ekuziphumuleni, indawo yonke nemvelo kuzokhuluma kuwe, uzobona ukuthi ulwazi seluvele lungaphakathi kini; uzokunqoba zonke izithiyo, futhi uzothola phezulu kuzo zonke izinkanuko nezinkinga. Lokhu kungukuqina kokuthula.
Ungayelapha kanjani i-Afrika ekhuluma isiFulentshi ngomdlavuza wayo okuyiFrance? Ukwehlukaniswa nge-oda lakudala, okubonakala ngokwedelela nobuzali bamandla ombuso wangaphambili wamakholoni, osekuphenduke amandla we-neo-colonizing, akunakwenziwa ngaphandle komhlatshelo.